Madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweeyay golaha wasiiradda cusub oo uu soo dhisay Raysulwasaare Khayre - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweeyay golaha wasiiradda cusub oo uu soo dhisay Raysulwasaare Khayre
Madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweeyay golaha wasiiradda cusub oo uu soo dhisay Raysulwasaare Khayre
March 21, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweeyay golaha wasiiradda cusub oo uu soo dhisay Raysulwasaare Khayre. [Xigashada Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay golaha wasiirada cusub ee uu maanta ku dhawaaqay Raysulwasaare Xasan Cali Khayre.
Qoraal kooban oo uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Madaxweyne Farmaajo ayuu ku soo dhaweeyay golaha wasiiradda cusub.
“Waxaan soo dhaweynayaa magacaabida wasiiradda ee Raysulwasaaraha Soomaaliya. Waxaanu ka wadashaqayn doonaa danta ugu fiican oo ah in dadkeena iyo dalkeena ay helaan nabad iyo nolo,” ayuu yiri Farmaajo.
Farmaajo ayaa ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya in ay ansixiyaan golaha wasiiradda cusub si ay si rasmi ah shaqadooda u la wareegaan.
Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Talaado ah ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiiradda, oo ka kooban 26 wasiir, iyo ku xigeenadooda iyo shan iyo toban wasiir dowle.
Golaha Wasiiradda cusub ayaa la filayaa in ay baarlamaanka hortagaan maalmaha soo socda si codka kalsoonida loogu qaado, sida uu qabo dastuurka dalka.